Uyibeka njani i-induction yesiFrentshi kwiLizwi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyibeka njani induction yesiFrentshi kwiLizwi
Lola ifani | | ngokubanzi, Amaqhinga, Tutorials
Isangria yaseFrance luhlobo lwesangria apho umgca wokuqala womhlathi ulungiswe kumda wephepha kwaye okuseleyo kushenxiselwa kancinci ngasekhohlo. Nangona ingaqhelekanga ukusebenzisa olu hlobo lokungeniswa kwizicatshulwa, Ewe, isetyenziselwa ukwenza ubalo kunye nokubhalwa kwibhayibhile yemisebenzi yokufunda kwimigangatho yeAPA. Kule posi siza kukufundisa indlela yokubeka i-induction yesiFrentshi kwiLizwi. Siza kuchaza ukuba ungayenza njani inyathelo ngenyathelo, sithathela ingqalelo ukuba indlela yokumisela iyahluka kancinci ngokuxhomekeke kwinkqubo yokusebenza yekhompyuter yakho.
1 Vula uxwebhu kwaye uncamathisele umhlathi kuvavanyo
2 Uyibeka njani i-sangria yesi-French kwi-Mac
3 Uyifaka njani i-induction yesiFrentshi kwiWindows
4 Uyiseta njani induction yesiFrentshi kuhlobo lweWebhu
Vula uxwebhu kwaye uncamathisele umhlathi kuvavanyo
Masenze uvavanyo. Yiya kwiLizwi kwaye uncamathisele umhlathi wokubhaliweyo. Okulandelayo, kuya kufuneka ukhethe umhlathi uphela. Amanyathelo esiya kuwalandela ngokulandelayo aya kuxhomekeka ekubeni inkqubo yakho yokusebenza yiWindows okanye iMac nokuba usebenza kwiLizwi kwi-Intanethi okanye kwinguqulelo yedesktop.
Uyibeka njani i-sangria yesi-French kwi-Mac
Ngomhlathi okhethiweyo, yiya kwibar ephezulu kwaye ucofe kwi "fomathi" isithuba. Kwimenyu ehlayo, kufuneka ukhethe "umhlathi".
Ifestile iya kuvulwa ngokuzenzekelayo. Kwi "induction" candelo, khangela "ekhethekileyo" kwaye ukhethe ukhetho "French induction". la umgama weziqendu ezifakwe ngaphakathi ngokubhekisele kumda unokuguqulwa ukuba utshintsha amaxabiso amiselweyo kwi "ku:". Kwisikrini esingezantsi, unokujonga kwangaphambili utshintsho. Xa wanelisekile sisiphumo, cinezela "ukwamkela".
Uyifaka njani i-induction yesiFrentshi kwiWindows
Qiniseka ukuba unawo umhlathi oyifunayo okhethiweyo. Ke, Yiya kwi "qala" ithebhu kwimenyu ephezulu kwaye ujonge icandelo "lomhlathi". Uya kucofa u-eIsimboli eboniswe kumfanekiso ongentla kwaye iwindow enolwazelelo kunye nokukhetha izithuba ziya kuvulwa ngokuthe ngqo.
Kwifestile, Jonga icandelo "sangria" kwaye kwi "special" uza kukhetha "sangria french". Kanye ecaleni kwayo, phantsi ko "in:" ungabutshintsha ubunzulu be-induction. Jonga ibhokisi ebonakala emazantsi efestile, kukujonga kuqala, xa wonwabile sisiphumo, cofa u "accept".
Uyiseta njani induction yesiFrentshi kuhlobo lweWebhu
Ukubeka i-induction yesiFrentshi kuhlobo lwewebhu lweLizwi kulula kakhulu, kuyafana kakhulu nendlela yenziwa ngayo kwinguqulelo yedesktop yeWindows. Xa umhlathi ukhethiwe, yiya kwithebhu "ekhaya" nakwicandelo "umhlathi" kuya kufuneka ucofe ku uphawu olubonakaliswe kumfanekiso ongentla. Ifestile iya kuvulwa. Kwi icandelo "sangria" kufuneka uye "okhethekileyo" kwaye ukhethe "isangria yesiFrentshi". Apha ngezantsi, phantsi kwe- "in:" ungachaza ubunzulu be-induction.
Into yokugqibela, mhlawumbi imenyu ephezulu incitshisiwe (ngamanye amaxesha kubonakala njengoku kusilela). Ukuba kunjalo, unokhetho ezimbini:
Unako yandisa imenyu haciendo Cofa kwisimboli eboniswe ngotolo kumfanekiso ongentla.
Kwakhona ungacofa amachaphaza ama-3 (jonga umfanekiso weskrini, bajikelezwe). Imenyu ehlayo iya kuvula, kufuneka ucofe kuyo "Ukhetho lomhlathi" kwaye iwindow iya kuvela ngenketho yokubonisa ngaphakathi kunye nokushiya isithuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyibeka njani induction yesiFrentshi kwiLizwi
Indlela yokwenza iibhilibhodi